May 2, 2020 AASYC Uncategorized 0
On 29th April, 2019 in the morning, Ko Zaw Gree was arrested by the Myanmar Army also known as Tatmataw at the military check of the entrance to the Mrauk-U city while he was going to repair his motorbike. In the next day morning the Myanmar Tatmataw battalion Mrauk-U based LIB (377) informed the residents to collect the body from the Mrauk-U hospital. Many believe that deceased Ko Zaw Gree (27) son of U Maung Hla was died due to torture and inhuman treatment by the Myanmar Army.
မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ လိပ်ဆင်းပြင်ကျေးရွာနေ ကိုဇော်ကြီး (၂၇) နှစ်၊ (ဘ) ဦးမောင်လှမှာ (၂၉.၀၄.၂၀) ရက်နေ့တွင် ၎င်းကျေးရွာမှ မြောက်ဦးမြို့သို့ ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ရန်အတွက် ထွက်သွားစဉ် မြောက်ဦးမြို့အဝင်၌ မြန်မာ့တပ်မတော်၏ စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှ ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီး လူမဆန်စွာ ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်မှုကြောင့် သေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားနှင့် လူငယ်များအစည်းအရုံး (AASYC)